Çekmeköy Sultanbeyli Metro လမ်းကြောင်းအိမ်ရာစျေးနှုန်းမျက်နှာကျက်
-ekmeköy Metro Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line ၏အိမ်နီးချင်းများရှိလူနေအိမ်ခန်းများ၏ပြန်လည်ရောင်းချမှုစျေးနှုန်းများကို Indexa.com ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအိမ်ခြံမြေအကဲဖြတ်မှုစင်တာကကြေငြာခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကိုပြန်လည်စတင်ရန်နှင့် 2022 ၏နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင်ဖွင့်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ Veysel Karani, [ပို ... ]
3 ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့တော်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျန်းမာရေးကွန်ဂရက် 2-4 ကိုAnပြီလ 2020 တွင် Ankara ၌ကျင်းပလိမ့်မည်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့တော်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျန်းမာရေးကွန်ဂရက် 2-4 ကိုAprilပြီလ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရပ်ကွက်များ၊ ခရိုင်များ၊ ပြည်နယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးများ၊ တိုက်ကြီးများ၊ ကျွန်းများနှင့်ထူးခြားသောအလှအပနယ်ပယ်များတွင်နေထိုင်သည်။ အတူတကွငါတို့ကမ္ဘာအကြောင်းကိုပြောနေတာ [ပို ... ]
Samsun Sivas မီးရထားလမ်းဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်!
ဆမ်ဆန်မြို့ပြမြူနီစီပယ် TCDD'ye သတိပေးချက် - 'မြို့တော်အသွားအလာသော့ခတ်ထားခြင်း' ဆမ်ဆန်မြို့ပြမြူနီစီပယ်၊ ဆမ်ဆန် - ဆစ်ဗတ်မီးရထားလိုင်း Ilkadim ခရိုင် Ataturk Boulevard လမ်းဆုံKılıçdedeလမ်းဆုံမြို့အသွားအလာအတွက်ကြီးမားသောယာဉ်ကြောဖြတ်သန်းမှုကိုဖြတ်သန်းခြင်း [ပို ... ]
UlukışlaBoğazköprüလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါရလဒ် - တူရကီနိုင်ငံမီးရထား2။ ဒေသဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဦး စီးဌာန (TCDD) သည် 2019 / 553589 GCC ၏ကန့်သတ်တန်ဖိုး 6.188.786,01 TL နှင့်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် 9.089.938,50 TL ၏ကန့်သတ်တန်ဖိုးရှိသည်။ [ပို ... ]
Kayseri Derevenk Viaduct ပြီးစီးခဲ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်
Kyseri Derevenk တံတားအားFreysaşမှမျှတသော console နည်းလမ်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောသမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ရက်စွဲ 31 ဖွင့်လှစ် [ပို ... ]
ယာဉ်ကြောနှင့်လုံခြုံရေးဌာနခွဲ၏မြူနီစီပယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မြို့ပြမြူနီစီပယ်ဌာနနှင့် S-plate မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနကိုအဖွဲ့များကစစ်ဆေးခဲ့သည်။ 19 [ပို ... ]
Mobile Office Caravan သည် Kartepeliler ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရှိသည်
Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ Mobile Office Caravan သည် Kartepe ခရိုင်ရှိခရီးသွားကဒ်ပြားများလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်စတင်ခဲ့သည်။ Mobile Office Caravan 10 [ပို ... ]
Ankara သတင်းဆိုး .. ! 1 Lira ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်အတူယာဉ်ရပ်နားခ
Ankara သတင်းဆိုး .. ! 1 Lira ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်အတူယာဉ်ရပ်နားခ၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးမှဖျက်သိမ်းခဲ့သော Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်၊ 1 ပေါင်သည်ကားရပ်နားခကိုကြေငြာသည်။ Ankara အတွက်စည်ပင်သာယာယာဉ်ရပ်နားအခကြေးငွေ [ပို ... ]
Metro Istanbul မျှော်လင့်ထားသည့် Istanbul ငလျင်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်
Metro Istanbul မျှော်လင့်ထားသည့် Istanbul ငလျင်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်; 6,5-5 စက္ကန့်မတိုင်မီသဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်များအားအစောပိုင်းသတိပေးစနစ်ကြောင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောGDAŞသည်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိသုံးစွဲသူများအားသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ [ပို ... ]
အတားအဆီးမရှိသော Izmir သည်အခြားနိယာမတစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်
အတားအဆီးကင်းစင်သောİzmirသည်အခြားနိယာမတစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ မသန်စွမ်းသောကောင်စီ ၀ င် Ahmet Uğur Baran သည်ဒီဇင်ဘာလကမ္ဘာ့မသန်စွမ်းသူများနေ့ဒီဇင်ဘာတွင် mir ဇmirမြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ၏ရှေ့ဆောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။ လျဘာ, ဒီ application ကိုတူရကီ [ပို ... ]
နိုင်ငံခြားသားများသည် Mersin Metro ကိုပြည်ပမှလာရောက်လိုကြသည်
ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အများပြည်သူဘဏ်များထံမှချေးငွေများရရှိရန် Mersin သည်နိုင်ငံခြားသို့ ဦး တည်ခဲ့သည်။ Mersin Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Vahap Seçerမှပြောကြားခဲ့သည်။ ငါတို့တစ်နေရာရာကိုငွေကြေးနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကိုပေးချင်တယ်” [ပို ... ]